Xildhibaan cusub oo maanta kamid noqday Baarlamaanka Soomaaliya. – Hornafrik Media Network
Xildhibaan cusub oo maanta kamid noqday Baarlamaanka Soomaaliya.
HornAfrik-Xildhibaan cusub ayaa maanta kamid noqday Golaha shacabka Soomaaliya waana Gen horey u soo qabtay xilal muhiim ah.
Agaasimihii hore ee NISA Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud ayaa ku guuleystey doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb taasoo lagu tartamayay doorasho kursi ka banaanaa Golaha Shacabka Soomaaliya.
Goobta ay ka dhacaysay doorashada ayaa waxaa ku sugnaa madax ka tirsan Maamulka Galmudug oo uu ugu horeeyey Madaxa Xukuumadda,Siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ku nool Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud.
Inta aysan bilaaban codeynta doorashada ayaa waxaa jirtay in uu tanaasulay musharixii la tartami lahaa Cabdullaahi Maxamuud Gaafoow ee Xiireey Muxudiin Cumar,isaga oo sheegay in uu ka tanaasulay u tartamida kursigaas.
Guddoomiyaha Guddiga doorashada Xaliimo Yareey ayaa sheegtay inay doorashada dhaceyso,isla markaana cod lagu kala baxayo,iyada oo la raacayo habraaca doorashada.
Intaasi kadib waxaa la guda galay codeynta doorashada,iyada oo ay codkooda dhiibanayeen 51 ergo,waxaana ugu dambeyn Guddoomiyaha Gudiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Xaliimo Yareey ay ku dhawaaqday Natiijada,waxana ay kala heleen Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud 43 Cod iyo Xiireey Muxudiin Cumar oo helay 7 Cod waxaa halaabay hal Cod.
Al-shabaab oo la ogaaday in ay ku dagaalamaan hubka dowladda! iyo xogo badan.
Kenya oo la sheegay in ay xalay dib u soo celisay diyaaraad ka baxday Magaalada Muqdisho.